Induustriin gogaa sharafa alaa argachuuf karoorsee walakaadha gad milkkesuusaa beeksiisee - ዜና ከምንጩ
Induustriin gogaa sharafa alaa argachuuf karoorsee walakaadha gad milkkesuusaa beeksiisee
Instiitiyuutiin misooma induustrii gogaa Itiyophiiyaa galii sharafa alaa bara 2013tti galchuudhaaf karoorsee kessaa walakaadhaa gad qofa argachuusaa beeksiisee.
Dhaabbatichii waggaa bajataa kanatti dolaara Ameriikaa miliiyona 100 galchuudhaaf karorsee gara hojiitti yoo galees milkkessuu kan danda’e garu dolaara miliiyona 40 qofa ta’uusaa dayireektarrii komuniikeshinii dhaabbatichaa Birhaanuu Sarjeeboo Addis Maaladaatti himaniiru.
Wareerrii COVID 19 adunyaa gutuuratti damee kana heddu akka hubee kan ibsan Birhaanuun sharafnni alaa amma karoorfamee akka hin argamnnees gufuu guddaa ta’uusaa dabalanii kaasaniiru.
Induustriin gogaa sharafa alaa amma yaadamee akka hinargamsiifnne sababbiwan dabalataa sharafnni alaa galttewwan galchuudhaaf ooluu dhibuun rakko ta’uunsaa ka’eera.
Hirri’nni sharafa alaa deemsa homishaa warshaaleetti hojjatamaniif homishoota kemiikaalaa barbaachiisaa ta’an yaroo barbaachiisaatti amma barbaadamuu gara biyya kessaa galchuudhaaf sharafnni alaa barbaachisuu dhibamuunsaa shora mataasaa taphateera.
Keemikaaloota galtteedhaaf barbaachisan galchuu waliin wal qabate hirii’na sharafa alaa mudatee ilaallatte ittii gaafatamtoota motummaa ol’aanaa dabalate baankoota waliin mariin gaggefamaa jira.Mareen kuun bu’aa fidee waggaa bajataa dhufutti rawii hojji foye’a galmeesiisuuf xiyyeffanaadhaan hojjatamaa akka jiru beekameera.
Waggaa bajataa 2013tti Tamsiin COVID 19 nii hiri’sa yaada jadhuun sharafa alaan dolaara Ameriikaa miliyoona 100 argachuudhaaf karoorfamee akka ture kan kaasan dayireektarichii tamsiinsaa garuu hiriisuurra babalatee biyyaaleen homisha Itiiyophiiyaa fudhatan manaa akka hin baane labsamuusaatiin argamnnii sharafa alaa yaadamee gad bu’uunsaa beekameera.
Waggaa bajataa 2013tti motummaan sababbi gabaa qorree warshaaleen hojjatoota isaanii akka hin bittineesiinee taasiisuutiin deemsa milka’a galmeesiisuusaa kan ibsan Birhaanuun sanaras darbee gabaan kuun ittu hinjiraannee illee warshaaleen homishanii akka ka’an hojiin taasiisuu hojatamaa turuusaa ibsaniiru.Kuunis biyyaaleen sababbi COVID cufamanii turan yammu banaman homisha siiyaayiinaan erguudhaaf akka gargaaruu danddeesiisuuf yaadamee ta’u eeruu.
Daandiiwwan furmaataa akkanaa fayyadamuu danda’amuusaatiin bara bajataa 2014f malattowwan abddi keennan mulachuusaanii kan dubatan dayireektarrii komunikeeshinii baatii Adoleessaa qofa dolaarri Ameriikaa miliiyoona 28 galiin argamuu danda’uusaafii kunis abddii qabeessa ta’uusaa dabalanii kaasu.
Hirii’na qindoominaa bala’a warshaalee giddutti mulatuufii rakkolee giddutti mulattan hiikuuf motummaan warshaalee walitti dhiyyessee hojjachiisuuf yaalii taasiisaa jiraachuusaa dubataniiru.Deemsa kanaaniis ameentaafii qulqullina homiishaa guddiisuudhaaf sochii kessa galeera.
Instiitiyuutiin misooma induustrii Itiiyoophiiyaa waggaa bajataa 3014tti dolaara Ameriikaa miliiyoona 100 amma 120 argachuudhaaf karoorsee sochii kessa galeera kan jadhan Birhaanuun kanas gochuudhaaf rakkolee bara bajataa 2013 muddatan adda baasuudhaan bara 2014tti maqsuudhaan karoora isaa milkkeessuuf akka hojjatuu dabalanii ibsaniiru.
Dabalataaniis waggaa kana kessattii dhaabbatichii qorannaawwan 6 kan qorachiisee ta’uusaafii qorannaawwan kannen kessaa galttewwan akka keemiikaalaa alaa galan biyyaa kessatti homishamuun bakka buusuudhaan hiriisuuf qorannaan danddesiisuu qoratamee wanttonni abdii kennan mull’achuusaaniitiin haalii cimee ittii fufu danda’u akka mijatu eerameera.Kanatti dabalees hafteewwan warshaalee kessaa bahaan faalama naanno akka hin gessifnne warshaalee waliin walitti dhiyyenyaan hojjatamaa jiraachuusaas obbo Birhaanuu Sarjaboo Addis Maaladaatti himaniiru.
Total views : 7505204